हेर्नुहोस आजको राशिफल : आज फागुन ६ गते मंगलबार, कुन राशिको भाग्यफल कस्तो छ ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : आज फागुन ६ गते मंगलबार, कुन राशिको भाग्यफल कस्तो छ ?
Khabar house | ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०१:५२ | Comments
ज्योतिषी गणेश काफ्ले : वि.सं.२०७६ साल फागुन ०६ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी १८ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । परिधावी संवत्सर । उत्तरायन । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४१ । फाल्गुन कृष्णपक्ष । तिथि– दशमी, २७ घडी ४९ पला,बेलुकी ०५ बजेर ४९ मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र– ज्येष्ठा,०५ घडी २५ पला,बिहान ०८ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त मूल । योग– हर्षण,१३ घडी ४६ पला,दिउसो १२ बजेर १२ मिनेट उप्रान्त बज्र ।
मेष : पारिवारिक माहोलमा मिष्ठान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। कामहरु समयमै सम्पन्न हुने हुनाले थप काम गर्न जोस-जाँगर बढेर आउँनेछ। सहयोगीहरुबाट आर्थिक लाभ हुनेछ भने उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ। तपाईको चुम्बकीय व्यक्तित्वले सबैको मन तान्नेछ । व्यापार-व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानीका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
बृष : पढाई-लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ। सवारी साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा ध्यान दिनुहोला, नराम्रो घटना घट्न सक्छ । व्यापार व्यावसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने तथा आर्थिक कारो बार बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया-प्रेममा धोका हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा खटपट आउँनेछ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा बृद्धि हुने तथा यात्रा हुने योग रहेको छ ।
मिथुन : आवस्यक पर्दा साथ दिनेहरु प्रशस्त भेटिने हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ । परिवारका साथ देश बिदेशको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । स्थाई सम्पतिको भरपुर प्रयोग गर्न पाईनेछ । नाँफा मुलक काम गरि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने सेवा मुलक काम गरि नाम पनि कमाउँन सकिने हुनाले मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ । ईष्टमित्र तथा आफन्तका साथ रमाईलो यात्राको अवसर जुर्ने तथा मिठा मिठा परिकार ग्रहण गर्दै दिन कटाउँन सकिनेछ ।
कर्कट : अदालती निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँने तथा शत्रु परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । प्रतिष्पर्धामा प्रतिश्पर्धीको मनोबल गिराउँदै सकारात्मक उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। पुराना स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हल भएर जाने तथा पुराना लेनदेनका मुद्दाहरु किनारा लाग्नेछन् । अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुनुको साथै पुरस्कार जित्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि बढाई आम्दानीका स्रोतहरु बढाउँदै लान सकिनेछ ।
सिंह : पति-पत्नीबीचको सम्बन्धले दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ । सन्तान तथा आफन्तको सहयोगले प्रभावशाली काम बन्नेछ। नोकरीमा समाजोपयोगी कार्यको प्रशंसा सर्वत्र होला। राजनैतिक गतिविधिले समाजमा प्रभावशाली व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुर्याउला । अध्ययनमा उच्चता हाँसिल होला । वैदेशिक रोजगारीले जीवनस्तर सुधार्नमा मद्दत गर्नेछ । जग्गा जमिनको कारोबारले फाईदा गराउनेछ ।
कन्या : आमा तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सल्लाह तथा सुझाब पाईने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट राम्रो आम्दानि हुने छ । समाजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईको काम देखि सबै खुसि हुनेछन् । राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले सर्बसाधारण सँग सन्तुतिल व्यबहार गर्नुहोला काम बिग्रने हुँदा मान सम्मानमा कमि हुनेछ ।
तुला : नयाँ काम गरी मनग्गे धन तथा सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ भने उद्योग, व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । मापा-प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पति पत्नीबीच एकअर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । आँट, पराक्रम गर्न नडाराई अगाडि बढ्ने हो भने चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सकिनेछ । विवाद तथा हुलमुलका बीच पनि राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक : परिवार तथा नजिकका मानिसबाट तपाईको काममा सहयोग प्राप्त हुनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। काम देखाएर लाभ उठाउने समय छ। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। पढाइमा प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। पढ्ने लेख्नेकाममा मन जाने हुनाले सफलता हात लाग्नेछ ।
धनु : रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन्। संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइने छ । व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ। राम्रा तथा बिलाशिताका बन्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले अरु भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिनेछ । बिहानको समयमा लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ ।
मकर : कामको शिलशिलामा लामो दुरिको यात्रा हुने योग रहेकोछ । बिदशी सामानको व्यापार व्ल्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने बिदेशमा बसेर श्रम गर्नेहरुका लागि आजको दिन फलदायि रहने छ । काम गर्दा बिशेष ध्यान दिनुहोला द’ण्ड तथा जरिवाना हुने योग रहेकोछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा आफन्तह टाडिनेछन् । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
कुम्भ : भौतिक सम्पतिहरु जुट्नेछन् भने उपाहार प्राप्त हुने योग रहेकोछ । नयाँ कामहरु गरेर आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । सरकारि सम्पति तथा पृत्रिक सम्पति हात लागि हुने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । दाजु भाई वा अग्रज हरुको सुझाब तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउँन सकिनेछ । बिद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाई लेखाईमा मन जानेछ । बौद्धिकता प्रयोग गरि समाजमा राम्रा काम गरेर देखाउँन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ ।
मीन : सामाजिक तथा राजनितिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । समाजमा मानसम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । लगानीबाट फाइदा हुने योग रहेको छ। आत्मिय मित्र तथा आफन्तका साथ रमाइलो यात्राको सम्भावना देखिन्छ। काम गर्ने जोश, जाँगर र आत्मबल बढ्नेछ । न्यायिक काममा भएको उल्झन बिस्तारै हराउदै जानेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने कृषि तथा पशुपालनमा गरिएको लगानिबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।